Ny 8 Best Victorinox Baggage Items mba hividy amin'ny 2018
Tech & Gear Entana
Ny orinasa Soisa Victorinox dia nanorina ny lazany tany ambadiky ny vokatra malaza indrindra - ny Swiss Army Knife. Rehefa afaka 130 taona mahery ny varotra, mivarotra mivantana ny famantaranandro, ny fofona ary ny fiaramanidina, izay mifantoka amin'ny kalitao sy ny fomban-drazana. Ny valizy Victorinox dia nalaza manokana ho amin'ny famolavolan-tsaina malemilemy sy faharetana maharitra. Ireto ambany ireto dia ahitantsika ny mombamomba ny entana tsara indrindra amin'ny entam-barotra, anisan'izany ireo valizy misy fanaingoana manaitaitra sy kitapo maro be.
Ao amin'ny Black, Navy Blue na Olive Green, ny Victorinox Works Traveler 5.0 27-Inch Spinner dia vita amin'ny 100% Ballistic Nylon. Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy Lahatsoratra dinika Ny '' skin '' Voasintona Fijerena Hamaky Hanova Kodiarana roa mitaingina roa no miantoka ny hetsika mangina, mangarahara amin'ny seranam-piaramanidina ary manaisotra ny teboka mifandray amin'ny fanangonana valizy ao ambadikareo. Ampiasao kosa ny rafitra alim-pitondrana alaina mba hitarihana ny kitapo rehefa manondraka azy. Ny tohatra dia manana fikandrana avo telo heny sy maranitra amin'ny toerana misy ny fanindriana bokotra iray.
Ireo mpitsikera am-pihetsiketsehana Amazon dia tena tia ny fandaminana tsy misy fiafaran'ilay efitrano valizy. Ny System Gen More System Victorinox dia manolotra vahaolana dimy enti-mametaka, anisan'izany ny fakan-tsary azo alaina, X-shaped brakes compression ary ny fehikibo mifamahofaho. Azonao atao ny manavaka ny kiraronao amin'ny akanjonao amin'ny fampiasana ny Pack Divider More Divider, avy eo ampiasao ny fanamafisam-peo amin'ny zotra mba hampitomboana ny enta-mavesatra ao anatin'ny roa metatra. Misy efamira roa vita amin'ny ravina ao amin'ny rindrina, raha ny pocket U-foo eo anoloana ny kitapo dia natao hananana 17 "solosaina finday.
Vita amin'ny polycarbonate virjiny 100%, ny Victorinox Lexicon Hard-Side Suitcase dia manamora ny endritsaka matanjaka matanjaka izay mampitombo ny faharetany ary koa mampiendrikendrehana style. Ny efitranony namboarina dia mampitombo avo roa heny amin'ny fonosana marefo roa eo anelanelan'ny baoritra trolley. Ny kitapo lehibe lehibe napetraka ao anatin'ny sakaizan'ny kitapo dia manamboatra fantson-damosina tsotra izay mahatonga azy ho tsara indrindra amin'ny fanangonana lamban-jiro maloto.
Ny fikojakojana dia miaro amin'ny zipo-pipetrapetra-paika ary ny fametrahana ny famantaran'ny marika TSA. Ankafizo ny fitrandrahana 360º omen'ny kodiarana efatra lehibe roa ary ny alim-pandehanana aluminio misy loko telo samihafa. Eo am-pototry ny fanamafisam-peo, ny efitra fisakafoana iray misavoana dia manafina ny karapanondronao, ny penina sy ny fitaovana fanoloana SIM. Ny fametrahana 28.4 "x 12.2" x 19.7 ", ny valizy no mpiara-dia tonga lafatra ho an'ny dia lavitra ary tonga amin'ny aloky ny mainty na ny titàn.
Victorinox dia mifantoka amin'ny kalitao fa tsy ny vidiny am-pelatanana, ary toy ny "teti-bola" toy izany dia tsy fehezan-dalàna mifehy. Na dia izany aza, ny raharaha Etherius Large Expandable Travel dia fampiasam-bola hentitra ary iray amin'ireo valizy mora vidy indrindra amin'ny marika amin'ny Amazon. Ny akorandriaka polycarbonat 100% dia natao mba hikolokoloana sy hikoriana tsy misy koraka, ary mitazona ny tranga na mafy orina. Izy io dia manana kodiarana Hinimoto efatra ary metaly aluminium misy fiaramanidina manana haavo telo lehibe.
Amin'ny 29.5 "x 18.5" x 12.2 ", dia valizy lehibe misy fanamafisana izay mampitombo ny fahafaha mamolavola azy hatramin'ny 15%. Ny atiny dia tsy misy lamba niorenina ary navaran'ireo rindrin'ny ravin-tsofina amin'ny rantsana roa. Ampiasao ny bikabikan'ny Y-fantsona ao amin'ny gara mainty mba hitazonana ny akanjonao tsy misy dikany. Ny famantaranandro TSA-nankatoavina dia lohahevitra iray hafa, toy ny safidy manjavozavo metallika. Safidio ho an'ny mainty hoditra, varahina, volamena na volafotsy.
Ny Spiral Expandable Victorinox Spectra 2.0 dia manamboatra akorandriaka polycarbonat miaraka amin'ny endritsoratra matanjaka misy poizina. Izy io dia misolo tena ny drafitra maoderina lehibe indrindra, izay ahafahanao manangona ny valizy avy any ambany ka hatrany ambony amin'ny alàlan'ny varavarankely midadasika. Na dia sahirana aza ianao, dia manokatra ny varavarana misokatra ny lamosina roa. Ao anaty ao, dia hahita rindrina mitaingina mena, Y-endrika bitsaka fiterahana ary pocket lehibe zippered.
Ny tsara indrindra, ity 27.2 "x 17.7" x 11.8 "ity dia mitombo avo roa heny ny haben'io. Ity fefy ity dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny sehatra fanitarana hafakely, vita avy amin'ny fitaovana matanjaka sy maharitra azo avy amin'ny rano. Manaova akanjo fanampiny fanampiny araka izay ilainao, avy eo ampiasao ny bobongo miafina ivelany mba hanitsiana ny haben'ilay kitapo mifanaraka amin'ny fepetra takinao. Ao amin'ny mainty, marin-tanana na mena, misy lohahevitra hafa dia ahitana fefy mihidy sy kodiarana roa mitaingina roa.
Mbola tsy afaka manapa-kevitra amin'izay tadiavinao ve ianao? Ny valim-panontaniana momba ny kitapo entana tsara indrindra dia afaka manampy anao hahita ny zavatra tadiavinao.
Miaraka amin'ny haben'ny 24 "x 16" x 10 ", ny Victorinox Avolve 3.0 Large Expandable Spinner dia mety ho toy ny fitaterana ho an'ny maro an'isa. Izy io dia mavesatra 6.6 kilao ary mampiavaka ny endrika tsara indrindra amin'ny valizy mafy sy marefo. Ny fonosana polycarbonate 100% dia miaro ny entanao amin'ny fihokoana sy ny dendrina, raha toa kosa ny famenoana ny fantsona tsy misy fangarony dia mamela ny paositera ivelany sy ny fampivoarana ny tanana.
Ao ivelany, hitanao ny efitrano lehibe misy rindrina U misy kitapo ao anaty kitapo ho an'ny tena ilainao ary misy akanjo lava ho an'ny solosaina 15.6 ". Ao anatiny, X-shaped brakes compression sy ny paosin-kitapo mavesa-doko matavy dia manampy amin'ny fitazonana ny entana voalamina. Toy izany ihany koa, ireo kodiarana efatra mpihinam-bitsika ary ny fitondran'ny alim-pitondran'ny fiaramanidina dia mitazam-baravarana lavitra ny seranam-piaramanidina. Anisan'izany ny mainty sy manga.
Alaivo sary an-tsaina ny sasany amin'ireo entana hafa mitondra kitapo tsara indrindra azonao vidiana.
Ny Vondron'ny Laptop Backout Vino Victorinox VX dia mampiavaka ny fomba fiasa matanjaka amin'ny fampihetsiketsehana tsy misy fiafarany. Manana sehatr'asa anatiny telo izy io, ka ao anatin'izany ny efitrano misy padded ho an'ny 16 "laptops sy ny efitrano afovoany misy tahirin-drakitra, paosy marefo sy ravin-tanim-pirahalahiana. Ny efitra fisaronana dia misy tontolon'ny fandaminana misy fizarana ho an'ny ID, pens, key fob ary electronics.
Voafafa ihany koa ianao noho ny safidinao amin'ny alàlan'ny paositera ety ivelany mba hividianana zavatra mora. Ampiasao ny bikababababababary mba hampiato ny enta-mavesatra be dia be, ary ny fehezan-koditra tafiditra ao anatiny mba hampidirana ny kitapo A. Ao amin'ny mainty, manga na mena, ny kitapo dia mamaritra 10.5 "x 19.5" x 14 ".
Vita amin'ny vato matanjaka sy matevina, ny 32,3 "x 15.4" x 12.6 "Victorinox VX Touring Wheeled Duffel dia natao ho an'ny zava-niainana. Ny fantsom-piravahana U iray dia ahafahana mivezivezy mora foana ao amin'ny efitrano mainty, izay manamboatra paosin-kitapo mivalom-bolo, Y-mofomamy misy tsindrona ary pocket'ny zipo-paosy miaraka amina fob ary tahirin-tahiry. Mihamitombo hatramin'ny farany ny habeny. Atsangaro ny akanjo fitondra anao amin'ny iray amin'ireo paosy roa mora vidy eo ivelan'ny duffel, ary ny electronics anao ao amin'ny paosin-trano miafina. Ao amin'ny tehezana mainty na anthracite, ny tranga koa dia manana tabilao monopole sy kodiarana skate roa.
Te-hijery ireo safidy hafa ve ianao? Jereo ny torolalana ho an'ny kitapo tsara indrindra ho an'ny dianay.
Avy amin'ny loko mainty enti-mamolavola azy ho 10.75 "x 8.5" x 3 "lehibe, ny Victorinox Adventure Traveler dia tsara ho an'ny mpivarotra kanto. Ny fiarovana RFID dia sehatra fivarotana lehibe, izay miaro ny angona mavesatra voatahiry ao amin'ny microchips ao amin'ny pasipaoronao sy ny karatra fiara. Misy rantsan-tanana mahatsiravina ho an'ny iPad-nao, ary andiam-paosy hafa ao amin'ny efitrano lehibe. Ny panamboaram-panamboarana mipetaka eo anoloana ny kitapo dia misy fizarana voatokana ho an'ny ID, karapanondro, penina sy fanalahidy. Amboary ny satroka feno hatsaram-bolo mba hanaovana azy amin'ny soroka na ny torso.
Ny 10 Best Duffel Bags mba hividy amin'ny 2018
The 8 Best Masters Sleep to Buy in 2018
Ny Items 8 Best TUMI Baggage mba hividy amin'ny 2018
Top fitsangatsanganana fitsangatsanganana
Ny Items 8 Best Rockland Baggage mba hividy amin'ny 2018
Toerana mahavariana hitsidika an'i Sabah atsinanana, Borneo
Kalandrian'ny 2016 ny SIDA sy ny Sida
North Sumatra, Indonezia
Ny Fikambanana Tantaran'ny Faritanin'i Western Reserve
Ny Top 10 Hotel ho an'ny Andro Valentin tamin'ny 2018
St. Petersburg, Rosia
Tantsaha any Maryland
Zavatra atao any Mosko mandritra ny ririnina
From Saigon to Hanoi: By Bus, Train, and Flight
Torolalana ho an'ny Tetezana Park & ​​Suspension Lynn ao Vancouver, BC